Soomaaliya ma deyn baa laga cafiyey? Waa maxayse"Bridge Financing"? Ee Uu sheegey bayle – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Soomaaliya ma deyn baa laga cafiyey? Waa maxayse”Bridge Financing”? Ee Uu sheegey...
Soomaaliya ma deyn baa laga cafiyey? Waa maxayse”Bridge Financing”? Ee Uu sheegey bayle
Soomaaliya Deyn Ma Laga Cafiyey? —- W.Q: Dr.Maxamuud Cabdiraxmaan
Waxaan dhegaystay Clip kooban oo Wasiir Beyle (Finance Ministry of SFG) duubay isagoo ku dooday dhowr arimood oo aan ku habboonayn maqaamka wasiir maaliyadeed.
Wuxuu ku tuhmay shacabka Soomaaliyeed iyo aqoon yahankooda in aysan fahmi karin qaabka iyo foormulooyinka (formula) loo maray “deyn cafinta” (haddii ay run tahay!).
Wuxuu sheegay Wasiirku in waddamada Soomaaliya deynta ku leh aan sharciyadoodu u ogolayn in ay deynta cafiyaan! Yaab!
Wuxuu sheegay in World Bank horay uga cafiyey, bishaan 25-keedana (25th March 2020) ay IMF ka cafin doonto isagoo ku kajamaya shacabkana wuxuu yiri “ishii buktooy ku bikaacso!” Hab-dhaqan Wasiir oo yaab leh!
Wasiirku wuxuu yiri waxaan isticmaalnay “Bridge Financing”.
Waa maxay “Bridge Financing”?
Marka shirkad (Dawlad) ay u baahan tahay maal gelin deg deg ah (short term financial obligation for working capital), isla markaasna ay filayso in ay hesho lacag maalgelin ah oo muddadeedu dheer tahay (secure long term investment/loan), laakiin aan hadda la heli karin laakiin la hubo (approved) in la heli doono muddo dhow ka dib (e.g. 1 sano, 6 bilood ka dib), waxay qaadataa deyn ay kusii buuxiso mudda ay lacagta sugeyso (bridging the gap). Deynta noocaan ah waxaa la yiraahdaa “Bridge Loan”, waxaana lagu qaataa Ribo dulsaarkeedu aad ku badan yahay sida 20% interest – maxaa yeelay muddada ayaa yar. Maalgelinta noocaan ahna waxaa la yiraahdaa “Bridge Financing”.
In Soomaliya aan deyn laga cafin ee qolooyin (Dawladdo, Shirkado Caalamiya) oo aan la faafin ay ka bixinaynaan deymaha hadda taagan iyagoo ku bixinaya dulsaar Ribo ah oo aad u badan.
In Soomaaliya qaadanayso deyn hor leh oo ka badan tii hore si qolooyinkaan ay u siiyaan deyntooda dhow (short term loan with high interest).
Rabbi talo ku filan.
Senator Cabdi Raxmaan Faroole oo eedeyn u jeediyay Madaxweyne Farmaajo